Le Webhusayithi iya kuVavanya umtsalane wakho usebenzisa ubuGcisa bobugcisa - Ezintsha
Eyona Ezintsha Le Webhusayithi iya kuVavanya umtsalane wakho usebenzisa ubuGcisa bobugcisa
Le Webhusayithi iya kuVavanya umtsalane wakho usebenzisa ubuGcisa bobugcisa
Kushushu okanye akunangqondo.
Iwebhusayithi entsha isebenzisa ubukrelekrele bokukuxelela ukuba ushushu kangakanani. Mane ulayishe ifoto yakho, kwaye le nkqubo iyakuqikelela ubudala bakho kunye nokulinganisa umtsalane wakho njengenye yezi zilandelayo: hmm… Kulungile, kushushu, kuyothusa okanye kufana nothixo. Iwebhsayithi kukudalwa kobambiswano phakathi kwe-The ILebhu yoBono beKhompyutha , Inkampani esekwe eZurich esebenza ngeeseti zedatha esekwe kumfanekiso, kunye neqela elisemva kohlelo lokusebenza lokuthandana IIMPAWU. Zama ifoto yakho Apha .
Kucacile ukuba kuyonwabisa nje, kwaye nangona iinkampani zinxibelelana nophando olusetyenziselwe le nkqubo, ziye zathumela isibhengezo kwisiza esithi singasithathi kancinci. Bongeze ukuba umtsalane uyathandeka kwaye bathi le nkqubo yayiqeqeshwe ikakhulu kusetyenziswa imifanekiso yabasebenzisi be-BLINQ, ikakhulu abaseSwitzerland.
Ngaphandle koku, kucacile amaxabiso ealgorithm ubukhulu becala kwifoto uqobo kunokuba umntu aboniswe kuyo. Umzekelo, ndilayishe iifoto zam ezintathu kwaye ndibone amanqaku amathathu ahlukeneyo.
Ukusuka ekhohlo ukuya ekunene, iifoto zilinganiswe zilungile, zintle kwaye ziyamangalisa. Ndacingelwa ukuba ndiza kuba-27 kumbindi wezithombe kunye nama-21 kwezinye ezimbini. Ndineminyaka engama-22, ngoko akukho kubi.
Ngaphandle koku, wonke umntu usangxama ukufaka iifoto zakhe kwaye athathe uvavanyo. Ukuqala kwam ukuzama, indawo yayigcwele kakhulu ndifumana umyalezo wemposiso.
Abantu babelana ngeziphumo zabo nge-hashtag #HowHot, kwaye uninzi luye ngaphaya kweefoto zazo kunye nokuvavanya imifanekiso yabantu abadumileyo ekucingelwa ukuba inomtsalane kwilizwe jikelele. Uluhlu olufutshane Ude wasebenzisa isixhobo ukukala amadoda akrelekrele kakhulu kaGlamour ka-2015. Uninzi lwalujongwa njengelothusayo okanye olushushu, kodwa zazimbalwa izinto ezazithengiswa ngaphandle, ezinje ngoPharrell Williams (owayekalwe njengolungileyo), kwelinye icala, uRobert Pattinson noJamie Dornan (abalinganiswa njengothixo.)
Kutheni iVictoria's Secret Secret Fashion Show ibingumcimbi omkhulu we China
UJake Gyllenhaal Uthetha ngokuthatha uMculo wakhe kwi 'NgeCawa epakini noGeorge'
UWarren Buffett ujoyine i-100 yeebhiliyoni zeeklabhu, ngasekunene kukaMark Zuckerberg
yeyiphi i-oyile ye-cbd elungele iintlungu
umdlalo wekota yobomi yobunzima
eyona bhanki yembewu ilungileyo kwi-intanethi
central park summerstage 2015 ishedyuli
Ngaba oosiyazi bangaphazama malunga nobudlelwane